Vonona ho Amin’ny Fahatsiarovana ve Ianao?
Hanam-potoana kokoa hiomanana ho amin’ny Fahatsiarovana isika, manomboka amin’ity taona ity. Raha andavanandro ny andron’ny Fahatsiarovana, dia tsy hisy ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana amin’io herinandro io. Raha faran’ny herinandro kosa izy io, dia tsy hisy ny lahateny ho an’ny besinimaro sy ny Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana. Manana fotoana fanampiny àry ianao, ka afaka mikarakara ny zavatra ilaina amin’ny Fahatsiarovana, hoatran’ny nataon’ny Kristianina tamin’ny taonjato voalohany. (Lk 22:7-13; km 3/15 1) Mila manomana ny fonao koa anefa ianao. Ahoana no hanaovana an’izany?
Saintsaino hoe nahoana no zava-dehibe ny manatrika azy io.—1Ko 11:23-26
Mivavaha ary diniho hoe manao ahoana ny fifandraisanao amin’i Jehovah.—1Ko 11:27-29; 2Ko 13:5
Miezaha hamaky sy hisaintsaina andinin-teny na lahatsoratra miresaka momba ny Fahatsiarovana.—Jn 3:16; 15:13
Misy an’ilay famakiana Baiboly ho amin’ny Fahatsiarovana ao amin’ny Fandinihana ny Soratra Masina Isan’andro. Mamaky sy misaintsaina azy ireny ny mpitory sasany. Ny hafa indray mampiasa an’ilay tabilao eto ambany. Misy koa mamerina mamaky an’ireo lahatsoratra ao amin’ny Tilikambo Fiambenana, izay miresaka momba ny Fahatsiarovana sy ny fitiavana nasehon’i Jehovah sy Jesosy. Na inona na inona fidinao, dia ataovy tanjona ny ho akaiky kokoa an’i Jehovah sy ny Zanany.